प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति, बजेट तथा कार्यक्रमबारे पूर्व तयारी::Online News Portal from State No. 4
३ तह तीनतिर !
बागलुङ, १ जेठ – गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्व तयारी थालेको छ । प्रदेशका बिभिन्न स्थानिय तहसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्दै बजेटका आधार र प्राथमिकताका क्षेत्रका निर्धारण गर्न सुरु गरेको हो । अर्थ व्यवस्था तथा विकास समितिले प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेका स्थानिय तहलाई पायक पर्ने जिल्ला सदरमुकाममा जम्मा गरेर पुर्व बजेट छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा पूँजीगत खर्च निकै कम भैरहेको भन्ने आलोचना भैरहेका बेला प्रदेश सरकारले नयाँ बजेटको तयारी थालेको हो ।
अर्थ तथा विकास समितिले पूर्व बजेटको छलफल सञ्चालन गरिरहँदा स्थानिय तहले भने चरम असन्तुष्टिहरु व्यक्त गरे । मंगलवार साविकको धौलागिरी अञ्चलका चार जिल्लाका जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानिय तहका प्रमुख, उप–प्रमुख र प्रशासकिय अधिकृतहरुलाई जम्मा गरेर सुझाव संकलन ग¥यो । कार्यक्रममा सहभागि स्थानिय तहका प्रमुखहरुले प्रदेश र तीन तहका सरकारका बिचमा रहेको असमझदारी र बजेट खर्च गर्ने प्रकृयाका बिषयमा असन्तुष्टि जनाए । पहिले केन्द्र त्यसपछि प्रदेश र अन्तमा स्थानिय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थानै गलत भएको कार्यक्रममा सहभागि अधिकांश पालिका प्रमुखहरुले गुनासो गरे ।
प्रदेश र केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरु र विकास निर्माणका काममा समन्वय नभएको उनीहरुको आरोप थियो । ‘बजेट बनाउँदा तल्लो तहका सरकारले के कस्ता कार्यक्रम अघि सरेको छ भन्ने बिषयमा जानकारी राखेर बजेट बनाईयोस’ काठेखोला गाउँपालिकाका बागलुङका अध्यक्ष अमर थापाले भने, ‘अन्धाधुन्दा योजना छनौट र बजेट बिनियोजनले एकै ठाउँमा तीन तहको बजेट परेको छ । समन्वय नभएकै कारण कयौं योजना सञ्चालनमा बाधा हुने गरेको छ ।’ प्रदेश सरकारले डोकोमा बजेट राख्ने र परियोजना प्रस्तावका आधारमा योजना छनौट र बजेट खर्च गर्ने परिपाटी अव्यवहारीक भएको सहभागीको भनाई थियो । संघिय संरचना बनेसँगै सर्वसाधारणले आशा गरेको जस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नयाँपन आउन नसकेको उनीहरुको भनाई थियो ।
‘हामीले काम थालेको दुई बर्ष समय बितेको छ, जनताका समस्या जस्ताको तस्तै छन, मोदी गाउँपालिका पर्वतका अध्यक्ष प्रेम पौडेलले भने, ‘प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँदा सानो तिनो कार्यक्रम पालिका स्तरबाटनै चल्ने गरी बजेटको दायरा कायम गरोस ।’ कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सांसदहरु इन्द्रलाल सापकोटा, कृष्ण थापा, बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्री लगायतले पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रमको औचित्यका बिषयमा बोलेका थिए ।
अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दिपक कोईरालाले छलफलमा उठेका बिषयमा जवाफ दिँदै महत्वपूर्ण सुझावहरुलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समाबेश गरिने बताए । अर्थ व्यवस्था तथा विकास समितिले यस अघि तनहुँमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आगामि जेष्ठ मसान्त भित्र नीति तथा कार्यक्रम र असारमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।